လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုသတင်းကြောင့် နယူးဇီလန် အစိုးရအဖွဲ့တွင်း ဂယက်ရိုက် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း နိုငျငံတကာသတငျး လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုသတင်းကြောင့် နယူးဇီလန် အစိုးရအဖွဲ့တွင်း ဂယက်ရိုက်
New Zealand's Prime Minister Jacinda Ardern attends an electricity projects signing ceremony during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Port Moresby on November 18, 2018. (Photo by SAEED KHAN / AFP)
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှုသတင်းကြောင့် နယူးဇီလန် အစိုးရအဖွဲ့တွင်း ဂယက်ရိုက်
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှု ရှိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတွေကြောင့် နယူးဇီလန် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်း ဂယက်ရိုက်နေပြီး ထိပ်တန်း ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးကို နုတ်ထွက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
နယူးဇီလန် ဝန်ကြီးချုပ် ဂျက်စီကာ အာဒန်းက ဒီနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့မှာ သူ့ရဲ့ ပါတီက ဒီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိပါးနှောက်ယှက်မှု စွပ်စွဲချက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ ကိုင်တွယ်နေကြောင်း ပြောပါတယ်။ အာဒန်း ၂၀၁၇ ခုနှစ်မှာ တာဝန်ယူပြီးနောက်ပိုင်း အဆိုးဆုံး မကောင်းသတင်း ဖြစ်ပါတယ်။
အသက် ၁၉ နှစ်အရွယ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးက နယူးဇီလန် အစိုးရအဖွဲ့အတွင်းက ဝန်ထမ်းတစ်ဦးဟာ မနှစ်က ဖေဖော်ဝါရီလမှာ သူကို လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ စော်ကားခဲ့ကြောင်း၊ လေဘာ ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ နီဂယ် ဟောဝါ့သ်ထံ အဲဒီနှစ် အောက်တိုဘာလမှာ တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း၊ ပါတီတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးနောက် အဲဒီ ကျူးလွန်သူကို အရေးမယူခဲ့ကြောင်း ပြောကြားခဲ့တာပါ။ ဟောဝါ့သ်ကတော့ ဒီတိုင်ကြားမှု သူ့ဆီ မရောက်လာခဲ့ကြောင်း တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။
New Zealand’s Prime Minister Jacinda Ardern attends an electricity projects signing ceremony during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) Summit in Port Moresby on November 18, 2018. (Photo by SAEED KHAN / AFP)
လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ထိပါးနှောကျယှကျမှုသတငျးကွောငျ့ နယူးဇီလနျ အစိုးရအဖှဲ့တှငျး ဂယကျရိုကျ
လိငျပိုငျးဆိုငျရာ ထိပါးနှောကျယှကျမှု ရှိခဲ့တယျဆိုတဲ့ သတငျးတှကွေောငျ့ နယူးဇီလနျ အစိုးရအဖှဲ့အတှငျး ဂယကျရိုကျနပွေီး ထိပျတနျး ခေါငျးဆောငျတဈဦးကို နုတျထှကျပေးဖို့ တောငျးဆိုမှုတှေ ရှိနပေါတယျ။
နယူးဇီလနျ ဝနျကွီးခြုပျ ဂကျြစီကာ အာဒနျးက ဒီနေ့ စကျတငျဘာလ ၁၁ ရကျနမှေ့ာ သူ့ရဲ့ ပါတီက ဒီလိငျပိုငျးဆိုငျရာ ထိပါးနှောကျယှကျမှု စှပျစှဲခကျြနဲ့ ပတျသကျလို့ ကိုငျတှယျနကွေောငျး ပွောပါတယျ။ အာဒနျး ၂၀၁၇ ခုနှဈမှာ တာဝနျယူပွီးနောကျပိုငျး အဆိုးဆုံး မကောငျးသတငျး ဖွဈပါတယျ။
အသကျ ၁၉ နှဈအရှယျ အမြိုးသမီးတဈဦးက နယူးဇီလနျ အစိုးရအဖှဲ့အတှငျးက ဝနျထမျးတဈဦးဟာ မနှဈက ဖဖေျောဝါရီလမှာ သူကို လိငျပိုငျးဆိုငျရာ စျောကားခဲ့ကွောငျး၊ လဘော ပါတီ ဥက်ကဋ်ဌ နီဂယျ ဟောဝါ့သျထံ အဲဒီနှဈ အောကျတိုဘာလမှာ တိုငျကွားခဲ့ကွောငျး၊ ပါတီတှငျး စုံစမျးစဈဆေးပွီးနောကျ အဲဒီ ကြူးလှနျသူကို အရေးမယူခဲ့ကွောငျး ပွောကွားခဲ့တာပါ။ ဟောဝါ့သျကတော့ ဒီတိုငျကွားမှု သူ့ဆီ မရောကျလာခဲ့ကွောငျး တုံ့ပွနျထားပါတယျ။
Previous articleယာဉ်မတော်တဆမှုမှာ ကီဗင် ဟတ် ကံကောင်းခဲ့တယ်လို့ ဒွိန်း ဂျွန်ဆင် ပြော
Next articleဖိလစ်ပိုင်မှာ သွေးလွန်တုပ်ကွေးကြောင့် လူ ၁ ထောင်ကျော် သေ